Izinto ongazenza e- Sagunto Imvelo, izikhumbuzo kanye ne-gastronomy | Izindaba Zokuhamba
Luis Martinez | | Spain amadolobha, Iziqondiso
Uma uzibuza okufanele ukwenze eSagunto Ngenxa yokuthi uhlela ukuya edolobheni laseValencia, sizokutshela ukuthi uzokujabulela kakhulu ukuhlala kwakho. Ngoba inhloko-dolobha yesifunda Inkundla ye-Murviero, esenyakatho yesifundazwe, ikunikeza kokubili izimanga zemvelo nezikhumbuzo.
Yasungulwa ngabakwa-Edetans ngaphansi kwegama elithi Imbongolo, wabe eseba I-Saguntum Roman futhi wamelana nokuvinjezelwa kweCarthaginians eholwa Hannibal esiqeshini esidume njenge Indawo yaseNumancia. Kusukela ngaleso sikhathi liye lagcina amandla athile, njengoba kuboniswa izikhumbuzo zalo zamaMoor, enkathi ephakathi nezanamuhla. Kodwa futhi ikunikeza amabhishi amahle ekushiseni kwamazinga okushisa e-Valencian amahle. Ngaphandle kokuqhubeka kwesikhathi, sizokukhombisa ukuthi wenzeni e-Sagunto.
1 Yini ongayibona nokuthi yini okufanele uyenze eSagunto?
1.1 Amabhishi aseSagunto
1.2 Idolobhana elidala ledolobha laseSagunto
1.3 Inqaba yaseSagunto
1.4 Inkundla yaseshashalazini yamaRoma
1.5 Izindlu zama-manor nezigodlo
1.6 I-Grau Vell
1.7 Ezinye izikhumbuzo
1.8 Imboni ye-El Sagunto
1.9 Sagunto Nature
1.10 Kancane kwe-gastronomy
Yini ongayibona nokuthi yini okufanele uyenze eSagunto?
Ngokuqondile, sizoqala uhambo lwethu lwaleli dolobha Umphakathi waseValencian emabhishi ayo bese sizosondela edolobheni ukuze sivakashele amatshe esikhumbuzo alo ayinhloko. Ngoba isikhungo esingokomlando seSagunto sitholakala cishe amakhilomitha amahlanu ukusuka ogwini futhi, ngakho-ke, kusukela ezindaweni ezinesihlabathi kanye nechweba elibalulekile lezohwebo.
I-La Almardá Beach
Edolobheni laseValencian ungajabulela amabhishi amathathu amakhulu. Eyodwa nje yileyo Ichweba laseSagunto, okusebenza njengesivikelo. Ngalesi sizathu, iyindawo enesihlabathi enamanzi azolile enazo zonke izinkonzo.
Yinhle nakakhulu Ibhishi lase-Almardá, okukhanga kwayo okuyinhloko kusezintabeni zezindunduma eziyizungezile futhi ezinenani eliphakeme lemvelo. Ekugcineni, unayo I-Corinto-Malvarrosa Beach, futhi eyenziwe ngesihlabathi, nakuba ngamatshe ogwini lolwandle. Izinga lamanzi ayo liholele ekutheni inikezwe ibheji yeBlue Flag izikhathi eziningi. Iphinde ithule kakhulu kulawa mathathu.
Uma sesijabulele ukugeza emabhishi, sizogxila kulokho okufanele sikwenze e-Sagunto, okungukuthi, ezithombeni zesikhumbuzo idolobha elingokomlando lase-Valencian elikunikeza lona.
Idolobhana elidala ledolobha laseSagunto
Portalet of the Sang
Ufaneleke njenge Impahla Yezintshisekelo ZamasikoYakhiwe imigwaqo eminingana phakathi nendawo kanye neMeya yasePlaza. Esikhaleni esincane kangaka, ungavakashela izikhumbuzo eziningi. Ngokuqondene nabezenkolo, i Isonto laseSanta Maria, eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX endaweni yamaSulumane endala. Yize ingazange iqedwe kwaze kwaba sekhulwini le-XNUMX, isabela kusitayela seGothic esikhombe saseValencian. Ngaphezu kwalokho, ezitebhisini ezifinyelela kuyo ukusuka enyakatho, ungabona imibhalo emibili yesiLatini.
Siphinde sikweluleke ukuthi uvakashele ama-hermitages edolobheni elidala njengalawo USanta mary magdalene, of igazi futhi of Inkosikazi Yethu Yosizi. Futhi, ukuqhela kancane, the Isonto lase-El Salvador, eyakhiwa phakathi kwekhulu le-XNUMX nele-XNUMX, nakuba isitayela samaGothic sakudala sigcwele kuso.
Kodwa-ke, enye yamagugu amakhulu ale ngxenye yeSagunto yi- AmaJuda, efinyelelwa ngekhothamo eliyi-semicircular eyaziwa ngokuthi Portalet of the Sang. Kuyo, uzobona ukuthi le ndawo yasendulo yamadolobha yayinjani, ngaphezu kokuvakashela indawo yokugeza okungokwesiko eyayibizwa ngokuthi mikveh.
Ngakolunye uhlangothi, esikhungweni esingokomlando seSagunto unezigodlo ezinhle ezifana nesaso Iholide laseDolobheni, ukwakhiwa kwe-neoclassical kwekhulu le-XNUMX, noma Indlu ye-Mestre Penya, i-Gothic ngesitayela kanye nekomkhulu lamanje le-Historical Museum yedolobha. Ekugcineni, njengakulo lonke idolobha, ungabona amasampula ezakhiwo zaseRoma ezifana, ngokwesibonelo, izinsalela zodonga Ithempeli likaDiana.
Itholakala esiqongweni segquma elivikela idolobha Isikhumbuzo Sikazwelonke kusukela ngo-1931. Nakuba isimo sayo samanje sisesimanjemanje, kukholakala ukuthi sasivele sikhona ezikhathini zase-Iberia. Khona-ke, kokubili amaRoma namaGoth, amaSulumane namaKristu aye aba nesandla ezinguqukweni zawo.
Ihlukaniswe yaba izindonga eziyisikhombisa ezibiyelwe phakathi kwazo i-Plaza de Armas egqamayo, eqondana nenkundla yamaRoma endala. Ngokwengxenye yayo, e-Plaza de San Fernando, ungabona I-Epigraphic Antiquarium, isampula yemibhalo eqoshiwe yase-Iberia, yesiRoma neyesiHebheru.
Inkundla yaseshashalazini yamaRoma
Ithiyetha yaseRoma yaseSagunto
Kungesinye sezimanga ongazivakashela eSagunto futhi isondelene kakhulu nedlule. Yavuselelwa ngokujulile ekupheleni kwekhulu lama-XNUMX, kodwa lokhu akuphazamisi ukubaluleka kwayo okukhulu. Yakhiwa kusukela ngekhulu lokuqala emva kukaKristu futhi yenziwa kusetshenziswa ithuba lokuthambekela kwentaba ukuze kulungiswe izitendi.
Kuyisibonelo esiphelele sokuvumelana kwezakhiwo zaseRoma zangaleso sikhathi, okwakusekelwe ezimisweni ze I-Vitruvian. Ngakho, i-orchestra, ngamamitha angu-22, inesilinganiso esiyinhloko lapho konke okunye kwakhiwe khona. Ngakolunye uhlangothi, emisebenzini yokumba yaseshashalazini, kutholwe izinto eziningi zangesikhathi esifanayo, njengezitsha zobumba, amatshe amathuna noma amatshe aqoshiwe.
Itiyetha akusona ukuphela kwesikhumbuzo esibalulekile seSagunto yamaRoma. Izinsalela ze isekisi, eyakhiwa ngekhulu lesibili ngemva kukaKristu futhi eyayinamandla okuthwala abantu abangaphezu kwezinkulungwane eziyishumi nanhlanu. Ngokufanayo, ungabona endaweni ukuthi babeyini domus njenge Izindlu e- Peixos, izikhumbuzo zemingcwabo nemigwaqo yangezikhathi zamaRoma.
Izindlu zama-manor nezigodlo
Ingaphakathi le-Casa dels Berenguer
I-Sagunto ayinazo izinsalela zesikhathi esidlule kanye ne-Renaissance edlule. Ngokwesibonelo, endala izindunduma ziye zalondolozwa ngokwengxenye neminye imibhoshongo yalo. Kodwa ungabona futhi izigodlo ezifana nalezi Izindlu e- Berenguer, i-Gothic ngesitayela futhi ehlala i-Visitor Reception and Interpretation Centre yedolobha kanye ne Delme Palace noma iPunyalet, yangonyaka we-1250 futhi okugcinwe kuyo i-facade kuphela.
I-Fort of the Grau Vell
Indawo yechweba elidala laseSagunto yaziwa ngaleli gama, lapho ungavakashela khona nezindawo ezithakaselwa kakhulu. Kuyindaba ka indawo yokuvubukula, lapho kuye kwatholakala khona izindlu nezakhiwo ezinjengodonga kanye nendlu yezibani okungenzeka kube khona izibani, zonke kusukela ezikhathini zamaRoma.
Futhi futhi iqembu elivikelayo likaGrau Vell, eyakhiwa ngekhulu leshumi nesishiyagalombili futhi ihlanganisa inqaba, umbhoshongo oyisikwele, ezinye izindawo zokugcina izimpahla kanye nebhethri. Ngaphandle kokungabaza, injongo yalo kwakuwukuvikela ugu ekuhlaselweni okungenzeka ngabaphangi noma amabutho ezitha.
Ipulazi eliqinisiwe lase-Agua Fresca
Ngokunjalo, emaphethelweni eSagunto unezinye izikhumbuzo ongazithakaselayo. Sizokhuluma nge ipulazi elinezivikelo eziqinile lase-Agua Fresca, eyakhiwa phakathi kwekhulu le-XNUMX nele-XNUMX. Yinqaba encane ehloselwe ikhaya lamakhosi asemaphandleni ayenamapulazi. Esinye isibonelo salolu hlobo lokwakhiwa, nakuba sithobekile kakhulu, yi ipulazi des Frares, nendlu yayo yasepulazini yekhulu le-XNUMX.
Siphinde sikweluleka ukuthi ubone i- Umshini wokugaya u-Torre Gausa, lo Umbhoshongo weSan Roque futhi i inqaba yejele, bonke bamemezele Izimpahla Zesithakazelo Sesiko. Futhi ekugcineni, the isigodlo saseSanta Ana, eyakhiwa ngekhulu leshumi nane futhi inesonto, isakhiwo sezindela kanye nensimu yezithelo.
Imboni ye-El Sagunto
Church of Our Lady of Begoña
Ezokuvakasha kwezimboni, eziqondwa njengalezo ezivakashela amagugu amadala okukhiqiza edolobha, zithole umfutho oqinile eminyakeni yamuva nje. Futhi, ngalo mqondo, i-Sagunto inokuningi engakunikeza yona.
Endaweni yechweba yesimanje yedolobha, uzothola izakhiwo eziningi ezizokuvumela ukuthi ukhumbule isikhathi esidlule sezimboni. Phakathi kwabo, abadala isibhedlela sabasebenzi, the ama-workshops jikelele noma i izingxenye zemikhumbi.
Kodwa futhi eliyigugu isonto le-Our Lady of Begoña, i-commissary, ikhasino yezokuzijabulisa noma amakhaya ezisebenzi. Kodwa-ke, mhlawumbe into ebaluleke kakhulu kuwo wonke la magugu emboni yi isithando somlilo egcinwe njengensalela yokuchuma kwangaphambili futhi yafakwa ngo-1922.
Akuyona yonke into eyisikhumbuzo namagugu ezimboni edolobheni lesifundazwe saseValencia (lapha sikushiyela isihloko mayelana yini ongayibona edolobheni laseValencia). Sesikutshelile ngamabhishi ayo. Kodwa, ngaphezu kwalokho, idolobha likhona phakathi kwamapaki emvelo eSierra Calderona kanye neSierra de Espadán. Ngenxa yalesi sizathu, inemizila emangalisayo yokuhamba ngezinyawo kanye ne-Nordic.
Phakathi kokuqala, okuthiwa umzila webanga elide GR-10, okuyingxenye yedolobha Puzol futhi uwela owokuqala kwezintaba esikushilo kuwe. Futhi, eduze kwaseSagunto unamaxhaphozi amabili anenani elikhulu lemvelo. Imayelana ezakwa-Almarda kanye ne-Los Moros.
Ungakwazi futhi ukuphefumula umoya omusha endaweni indawo yemvelo yaseRomeu, lapho ihlathi elibaluleke kakhulu kumasipala likhona. Ngaphezu kwalokho, uzokwazi ukubona izindawo zemivubukulo njenge Isithombe sika-Corbs futhi enye eCovaxa.
Ama-Pastissets amazambane amnandi
Ukuze uqedele uhambo lwethu lokuthi yini okufanele uyenze e-Sagunto, sizokweluleka ezinye zezidlo zayo ezijwayelekile. Phakathi kwazo kukhona irayisi elibhakiwe nge-cod, elungiselelwa ikakhulukazi ngeNkathi Yokuzila neSonto Elingcwele.
Kodwa, mhlawumbe ejwayelekile kakhulu yedolobha kukhona ama-pataqueta, amasemishi amancane ane-omelette kabhontshisi obanzi kanye nogalikhi othambile noma okhalweni notamatisi. I-tastier ngisho nangaphezulu ximos noma izinkwa zobisi ezithosiwe ezigcwele i-tuna, utamatisi, iqanda kanye nopelepele oluhlaza.
Okokugcina, uma kuza kokumnandi, unokuningi ongakuzama e-Sagunto. Ngokwesibonelo, San Blas amakhekhe, lo Coca De llanda, the Ama-Pastissets amazambane amnandi noma i Ama-donuts ka-Anis.
Sengiphetha, sikubonise okuningi ngalokho okufanele ukwenze eSagunto. Njengoba kungenzeka ubonile, inezikhumbuzo ezinhle kakhulu, indawo ekahle nokudla okumnandi. Ungakhohlwa ukuvakashela leli dolobha elihle Umphakathi waseValencian.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Spain amadolobha » Sagunto Izikhangibavakashi
Ungaya kuphi kwi-honeymoon
Izingwadule zase-United States